Ike nke In-mmadụ | Martech Zone
Wednesday, April 25, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Afọ ole na ole gara aga, anyị nwere ụfọdụ nzukọ na Cisco n'ezie Ekwentị ma ọ bughi ihe di ịtụnanya. Gwa mmadụ okwu ihu na ihu ihu nwere uru dị egwu. Ndị ụlọ ọrụ na Cisco kwenyere ma wepụta nke a infographic na ike nke nzukọ mmadụ.
Ihe ahịa ahịa a na-ekesa na-achọ agbanweela ụzọ ndị otu na-ekwurịta okwu na ndị ọrụ ibe, ndị na-ebu ngwaahịa / ndị mmekọ, na ndị ahịa nwere ike ikewa site ogologo ụzọ. Nnyocha zuru ụwa ọnụ nke The Economist Intelligence Unit, nke Cisco na-akwado, tụlere echiche ndị isi azụmahịa 862 banyere uru nke nzukọ mmadụ na mmetụta ha na karịa 30 usoro azụmahịa. Yabụ, kedu mkpebi? Nkwukọrịta okwu nke mmadụ ọ dị ike dịka anyị siri chee?
The infographic na-anọchite anya nsonaazụ sitere na a nyocha zuru ụwa ọnụ nke The Economist Intelligence Unit duziri, nke Cisco kwadoro, nke tụlere mmetụta ndị ndu azụmahịa 862 banyere uru nzukọ mmadụ na-enwe na mmetụta ha nwere karịa usoro azụmahịa 30.
Tags: Cisconkwurịta okwun'ime mmaduVidio AhịaTechnologytelepresence
Issuu: Ngwaọrụ maka ire ahia, obughi Magazin
Apr 25, 2012 na 8: 14 PM
Nnukwu ebe Doug! Nke a bụ ihe kpatara na enweghị m ike ịgbanye kuki ụmụaka scout:).
Echiche a kwekọkwara na ogidi 4 nke Guy Kawasaki nke enchantment. Na mmadu di ike, mana ikwesiri ibu onye ozo, kwesiri ntukwasi obi, di iche, wdg.